Ihe ngosi China Canton: GUODA Ngosiputa Igwe
BD ịnyịnya ígwè GD-City / Urban
Bike ngwa mma
Izu gara aga Guoda Tianjin Inc.Marketing ngalaba kwadebere maka nke mbụ online Export Fair si.Wwetara ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị iji wepụta ngwaahịa iwebata vidiyo.Ma ka ọ dị ugbu a, anyị dekọtara usoro mmepụta ngwaahịa ahụ. nke ahụ were ọtụtụ ụbọchị.
N'akụkụ nke ahụ, ngalaba na-ere ahịa na-ekwupụta ụlọ ọrụ ahụ iji hụ na ngwaahịa na ihe atụ dị na ya. Na njedebe nke izu gara aga, anyị mechara nkwadebe nke ihe ndekọ ahụ, nyefee ha na ụlọ ọrụ gọọmentị nke Export Fair wee mechaa agwụcha. na-arụ ọrụ zuru oke.
N'ikwu okwu banyere ihe ngosi nke esenidụt nke mba ọzọ, anyị ga-enwe ụfọdụ owuwe ihe ubi.Ọ ga-eme ka ndị ahịa si na email gaa vidiyo, mee ka ozi kọntaktị kwesịrị ekwesị. ihe onwunwe, na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ na ihe ngosi ngwaahịa .etc.
GUODA (Tianjin) Sayensị na Teknụzụ Development Incorporated Company
Tobọchị Sọnde ruo Satọde
24 awa na ntanetị